လုံခြုံရေးအာမခံချက်မရှိပေမယ့် နယ်မြေတည်ငြိမ်လို့ နေရပ်ပြန်သူတွေရှိလာ
လုံခြုံရေးအာမခံချက်မရှိပေမယ့် နယ်မြေတည်ငြိမ်လို့ န...
6 ต.ค. 2562 - 15:30 น.
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဗန်းမော်မြို့ပေါ်စစ်ရှောင်စခန်းတွေကနေ အိမ်ထောင်စုတစ်ရာလောက် နေရပ်ပြန်သွားပါတယ်။ ဒီအိမ်ထောင်စုတွေဟာ ကချင်ပြည်နယ်တွင်း မုန်ဒိမ်းပါကျေးရွာက ဖြစ်ပြီး စစ်ရှောင်နေရတာ ခြောက်နှစ်ကျော်အကြာမှာ ခုလိုနေရပ်ပြန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
KBC အပါအဝင် ကချင်ပြည်နယ်က ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်ရှောင်ပြည်သူများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ KHCC က ကချင်ဒေသ စစ်ရှောင်တွေ လုံခြုံမှုရှိရှိနဲ့ နေရပ်ပြန်ဖို့ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KIA တို့နဲ့ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကနေ သဘောတူညီချက် မရသေးခင်မှာပဲ ခုလို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် နေရပ်ပြန်တဲ့စစ်ရှောင်က နှစ်ထောင်ကျော်ရှိလာပြီလို့ KBC ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ခလမ်ဆန်ဆွန်က ပြောပါတယ်။
အခု ပြန်သွားကြတဲ့ မုန်ဒိမ်းပါကျေးရွာမှာဆို တိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ဘဲ ရွာတွင်း တပ်စွဲထားတဲ့ နှစ်ဖက်တပ်တွေ ပြန်ရုတ်သွားတာကြောင့် နေရပ်ပြန်သူတွေ လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
"ကျောင်းလည်းဖွင့်ထားပြီ။ ပညာရေးဘက်က ဆရာတော့မလာသေးဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းတာဝန်ခံကတော့ သူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပြီးမှ ရွာခံဆရာတွေ ပို့နေတာရှိတယ်။ စာလည်း သင်နေပြီ။ ခရစ်ယာန်မူကြိုကျောင်းကလည်းဖွင့်နေပြီ။ အဲဒီမှာ ဘယ်စစ်တပ်၊ လက်နက်ကိုင်မှမရှိတော့ သူတို့အတွက်တော့ လုံခြုံပါတယ်" လို့ မုန်ဒိမ်းပါကျေးရွာကို သွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာခလမ်ဆန်ဆွန်ကပြောပါတယ်။
ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် နေရပ်ပြန်နေတဲ့ စစ်ရှောင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုနေတယ်လို့ နေရပ်ပြန်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ရွာကိုစွန့်ခွာခဲ့တာကြာပြီဖြစ်လို့ အိုးအိမ်တွေ၊ လမ်းတွေ ပျက်စီးနေပြီး စစ်ဘေးဒုက္ခသည်မဖြစ်ခင်က အိမ်ထောင်စု ၃၀၀ ကျော်လောက်ရှိခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ အိမ်ထောင်စု တစ်ရာကျော်လောက်ပဲ ပြန်လာကြသေးတယ် လို့ မုန်းဒိမ်ပါရွာသား ဦးဘရန်တောင်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာခုတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရတဲ့ ဒီရွာမှာ ပြန်လည်အခြေချလာတဲ့နေရပ်ပြန်သူတွေအတွက် စားဝတ်နေရေး အခက်တွေ့နေတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
"အိုးအိမ်တွေပျက်စီးတာများပါတယ်။ လမ်းတွေလည်း အကုန်လုံးပစ်ထားတာကြာပြီဆိုတော့ ခြုံပုတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ လောလောဆယ် အလုပ်ကတော့ လယ်လုပ်နိုင်တဲ့သူကလည်း လယ်ပြန်လုပ်ပေါ့။ တချို့တွေက ကျပန်းအလုပ်ပေါ့။ စားဝတ်နေရေးအတွက် အချင်းချင်းပံ့ပိုး ကူညီနေကြတာပဲရှိတယ်။ တချို့တွေက အရမ်းကို ဒုက္ခဆင်းရဲတွေရှိနေပါတယ်။ အဓိကက ဆန်တို့ ဘာတို့ လိုနေပါတယ်" လို့သူက ဆိုပါတယ်။
မုန်ဒိမ်းပါရွာဟာ ဗန်းမော်မြို့ကနေဆို ၂၈ မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ နှစ်ဆန်းပိုင်းကတည်းက ဒီရွာကို စစ်ရှောင်တွေ စပြန်လာတာတွေရှိပြီး ဒီအောက်တိုဘာလ ဆန်းပိုင်းမှာတော့ အိမ်ထောင်စုတစ်ရာနီးပါး ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ KIA တို့အကြား ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကစလို့ တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် ကချင်ဒေသက လူတစ်သိန်းကျော် စစ်ရှောင်ခဲ့ရပြီး အခုထိ နေရပ်မပြန်နိုင်ကြသေးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်က တစ်ဖတ်သတ်အပစ်ရပ်ကြေညာခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာကစလို့ ကိုးလကျော်အတွင်း ကချင်ဒေသမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက် ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တပ်မတော်က ဦးတည်လာတာဖြစ်တယ်လို့ KIA ဘက်က သုံးသပ်ပြောကြားတာရှိနေပါတယ်။
KIA ဟာ အစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်ရေးဆွေးနွေးဖို့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးနေပြီး ဒီလအတွင်းမှာပဲ ထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လုံခြုံရေးအာမခံချက်မရှိပေမယ့် နယ်မြေတည်ငြိမ်လို့ နေရပ်ပြန်သူတွေရှိလာ